IJomethri Isomers Inkcazo kunye nemizekelo
Indlela esebenza ngayo i-Cis-Trans Isomers
Iisomers ziintlobo zeekhemikhali ezinomlinganiselo ofanayo weekhemikhali, kodwa ziyahlukahlukana. Umzekelo, funda nge-geometric isomerization:
I-Isomer Isomfa Inkcazo
Iifometha ze-geometri ziintlobo zeekhemikhali kunye nohlobo olufanayo kunye nobungakanani bee- athomu njengezinye iintlobo, kodwa zinezohlukeneyo zesakhiwo sejometri. I-Atom okanye amaqela abonisa amalungiselelo eendawo ezahlukeneyo ngapha nangapha kwintsebenziswano yeekhemikhali okanye isakhiwo sesandi.
I-geometric isomerism ibizwa ngokuba yi-configurational isomerism okanye i-cis-trans isomerism. Qaphela ukuba i-cis-trans isomerism yinkcazelo eyahlukileyo yejometri kune-EZ isomerism.
Imigqaliselo ye-cis ne-trans isuka kumazwi esiLatini cis , okuthetha "ngapha nangapha". kwaye idluliselwa , ithetha "ngaphesheya". Xa abatshintshi bobabini baxhomekeke kwicala elifanayo kunye nomnye (kwicala elinye), i-diastereomer ibizwa ngokuba yi-cis. Xa abafaki-zikhundla basemacaleni aphikisanayo, ukuqhelaniswa kweso sifundo.
Iimpawu ze-geometri ze- geometric zibonakalisa iimpawu ezahlukileyo, kubandakanywa amaphulo abilayo, ukuhlaziya, ukuphazamiseka kwamanzi, ukuxinwa, kunye ne-solubilities. Imiba kule mihluko ibangelwa yimpembelelo yomzuzu we-dipole. Ii-dipoles zentshintshintshi ezithintelayo zikhansela enye ngaphandle, apho iipopol zendawo yokufaka endaweni yendawo ziyi-additives. Kwi-alkenes, i-isomers ehambayo inamaphuzu aphezulu, i-solubility esezantsi, kunye ne-symmetry ephezulu kune-isis.
Ukuchonga i-Geometric Isomers
Izakhiwo ze-squeletti mhlawumbi zibhalwa kunye neendlela ezigqityiweyo zeebhondi ukuze zibonise iicometer isomers. I-IUPAC ayincomo ukuphawula kwinqanaba elingaphezulu, kukhetha iindlela ze- wavy ezidibanisa i-heteroatom. Xa kukwaziwa, umlinganiselo we-cis- to-transform structures kufuneka uboniswe.
I-Cis- kunye ne-trans
Imizekelo yeeJomethri Isomers
Iimpawu ezimbini zejometri zikhona kwi-Pt (NH 3 ) 2 Cl 2 , enye apho iilwanyana zihlelwe ngeenxa zonke kwi-Pt ngokulandelana kweCl, Cl, NH 3 , NH 3 , kunye nezinye apho iintlobo ziyalwe NH 3 , Cl, NH 3 , Cl.
Ziziphi izinto eziphambili kwi-Skydive?
I-Zealandia: Izwekazi eliManzi laseMzantsi
Iimpawu eziMnandi zoTywala zomtshato kunye neMemes
Qala ukufunda isiNgesi kunye nezifundo ezilula